BETROKA : Dahalo dimy lahy sarona, nahatrarana taratasy famotsiana omby halatra
Efa an-taonany maro no noezahina novakiana ny toerana fieren’ny dahalo sy fanafenana omby halatra any amin’iny distrikan’i Betroka iny, saingy miveri-maina avokoa ireo mpitandro filaminana, rehefa tratry ny fandrik’ireo olon-dratsy noho ny tsy fahafantarana lalana mankao an-toerana. 10 juillet 2019
Na izany aza anefa dia tsy mampihemotra azy ireo ny fisamborana ireo dahalo. Tra-tehaky ny zandary avy ao amin’ny Borigady Andriandapy tao Ilakaka ireo dahalo ikoizana miisa dimy lahy izay fantatra fa tompon’antoka tamin’ny halatr’omby niseho tamin’ny volana Jona 2019 lasa iny.
Voaporofo tamin’ny famotorana nataon’ny mpitandro filaminana fa efa ela nokarohina ireo olon-dratsy ireo saingy noho ny fiaraha-mientana tamin’ny vahoaka dia haingana ny fomba fiasa ary nalaky tratra ireto farany. Fantatra moa fa tratra teny amin’izy ireo ihany koa ny taratasy famotsiana omby halatra tamin’io fotoana io. Nandritra ny fotoana nanatanterahana ny fanadihadiana rahateo koa no nahalalana fa misy olona ambony sy tompon’andraikitra mpanao famotsiana omby halatra voasaringotra amin’izao raharaha izao.
Tsara moa ny mampatsiahy fa tsy vao izao no nahitana ity tranga famotsiana omby halatra ity any amin’ny Faritra atsimo iny koa manaitra ny zandary mpanao fisafoana sy ny fitondram-panjakana hatrany ny fokonolona mba hijery akaiky ny tena zava-misy marina. Efa ela no lasibatra, hany ka maniry ny mba hisian’ny fiverenan’ny fandriampahalemana amin’ny laoniny ireto farany. Efa natolotra ny Fampanoavana ao Betroka ireo dahalo, taorian’ny famotorana nataon’ireo Zandary, ary tazomina am-ponja vonjimaika.
Marihana fa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpitandro filaminana, indrindra fa ireo zandary any amin’iny Faritra Atsimon’ny nosy iny amin’ny famerenana tsikelikely ny fandriampahalemana amin’ny resaka asan-dahalo. Raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny hoe nisy tanànan-dahalo vitsivitsy amin’izao, any an-toerana vonon-kiara-hiasa amin’izy ireo. Efa namerina ny basy sy fitaovam-piadiana maro fampiasany amin’ny asa ratsy rahateo moa izy ireo. Mitohy hatrany araka izany ny ezaka amin’ny ady amin’ny asan-dahalo ary mbola nametraka fahavononana ny amin’izany koa ny mpitandro filaminana raha ny fanampim-panazavana voaray tato ho ato.